U-COVID ubulale Ekundo! Aloha kwingonyama yaseAfrika eWaikiki
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Tourism » U-COVID ubulale Ekundo! Aloha kwingonyama yaseAfrika eWaikiki
Iindaba Eziphambili zaseHawaii • iindaba • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • Iindaba zase-USA ezaphulayo
I-COVID yabulala phantse abantu abazizigidi ezi-5 okoko yabangubhubhani kwasekuqaleni kuka-2020.
Rhoqo i-cotton zezilwanyana ezininzi ezifa yi-COVID. Omnye yayingu-Ekundo, ingonyama yase-Afrika ehlala kwi-Honolulu Zoo eWaikiki, kunye nentandokazi kubakhenkethi iminyaka emininzi ukuba babukele.
USodolophu wase-Honolulu uRick Blangiardi ubhengeze ukubhubha kwengonyama eneminyaka eli-13 ubudala.
Ingonyama ibhubhe ngemeko zempilo ezingoMvulo e Zoo yase Honolulu kwiWaikiki
Zombini i-Ekundu kunye ne-12 yeminyaka yobudala yengonyama, uMoxy, uqale wabonisa iimpawu zokugula okuphezulu okuphefumla ngokukhohlela ngoMvulo, Okthobha 4, 2021.
Iisampulu zaqokelelwa kwangoko kwiingonyama zombini ukuvavanya i-SARS-CoV-2, intsholongwane ebangela i-COVID-19 ebantwini.
U-Ekundu, onyangwe isifo sokuxhuzula ngaphezulu kweminyaka emihlanu, waqala wagula de wangabe esatya. Nje ukuba angabinakufumana amayeza axhasayo ekutyeni, amaqela okhathalelo lwezilwanyana kunye nezilwanyana agqiba kwelokuba amthomalalise ukuba anike unyango olunjenge-antibiotics, unyango lwamanzi, kunye namanye amayeza ukumnceda azive engcono. Kwangelo xesha, kunokuqokelelwa iisampulu ezithile ngakumbi ukuze kuvavanywe ngakumbi ezinye izizathu ezinokubangela isifo sakhe sokuphefumla. Iimpawu eziphezulu zokuphefumla zikaEkundu zisonjululwe ekuphenduleni kunyango, kodwa waqala wabonisa iimpawu zesifo sokuphefumla esisezantsi kunye nobunzima bokuphefumla kwiintsuku ezimbalwa ezizayo. Ngaphandle kokujonga ujikeleze ixesha kunye nonyango oluqhubekayo, u-Ekundu usweleke kwiveki enye emva kokuba ebonakalisile imiqondiso yakhe.
Ngenxa yovavanyo olwenziwa kwiilabhoratri zelizwekazi, iziphumo eziveza zombini iingonyama zazintle nge-SARS-CoV-2 zafunyanwa kuphela emva kokuphuma kukaEkundu. Ukulindela ikhonkco le-COVID, abasebenzi bezonyango bezilwanyana baqala unyango kunye neeprotokholi ze-biohazard ezihambelana noko kwenziwa ezinye ii-zoo ezivunyiweyo ze-AZA ukuphendula kuqhambuko lweSARS-CoV-2 kwilizwe liphela. Ugqirha wezilwanyana u-Jill Yoshicedo wabelane ukuba "ngexa uninzi lwe-SARS-CoV-2 usulelo kwiikati ezinkulu ezingezizo ezasekhaya zizigulo ezinobulali eziphendula kakuhle kukhathalelo oluxhasayo, i-Ekundu, ngelishwa, yenye yeemeko ezintsha apho i-COVID ibonakala inxulunyaniswa nobunzima inyumoniya nokuphulukana nobomi kwezi ntlobo. ”
The Zoo Okwangoku ulindele ukuvavanywa okuqinisekisiweyo kwe-SARS-CoV-2 kunye neziphumo zezifo eziza kunceda ukumisela ubungakanani bendima yosulelo lwentsholongwane olwadlala ekufeni kwakhe. Ngelixa iimpawu zikaMoxy zibonakala zincipha ngokukhawuleza, abasebenzi bajonge ngononophelo kwaye bayaqhubeka nokumnika ukhathalelo kunye nonyango. Imeko kaMoxy ibonakala izinzile ngoku kwaye ikumkhondo wokubuyela kwimeko yesiqhelo.
Umthombo wosulelo lweengonyama awaziwa. Bonke abasebenzi abebesondelelene kakhulu neengonyama babekhe bagonywa ngaphambili kwaye bathobela umgaqo-nkqubo wokugonya abasebenzi weSixeko. Baye bavavanyelwa i-COVID-19 kwaye bafunyanwa bengenayo. Abasebenzi be-Zoo bayaqhubeka nokusebenzisa iinkqubo ezingqongqo ze-biohazard zokuthintela nakuphi na ukusasazeka kwintsholongwane kwezinye iindawo zezilwanyana.
Umlawuli weZoo uSantos uqaphele, “Ndiyabancoma abasebenzi bethu bezilwanyana kunye nabagcini ngemigudu yabo engakhathaliyo kunye nokukhathalela i-Ekundu. Njengokuphela kwengonyama eyindoda e-Honolulu Zoo, u-Ekundu wayethandwa kwaye eyimbonakalo. Umyezo wezilwanyana ukhathazekile kukusweleka kwakhe, kwaye basebenza kunye ukuhlala begxile kwimpilo nakwintlalontle kaMoxy, kunye nokukhathalela ezinye izilwanyana zethu kumyezo wezilwanyana. ” USantos uqhubeke wathi, “Njengokuba izilwanyana zinokufumana i-COVID-19 ebantwini, abasebenzi bethu bayakhunjuzwa ukuba basebenze ngokuzinzileyo nangokungagungqiyo basebenze ngokukhuselekileyo kwaye balandele imigaqo yokugcina izilwanyana zethu zikhuselekile. Sinqwenela ukuthatha eli thuba ukukhumbuza zonke iindwendwe ezihambela umyezo wezilwanyana ukuba zinxibe imaski kwiindawo ezichongiweyo ezisengozini yezilwanyana ezibandakanya iinkawu, iikati, izinja kunye neempuphu. ”
U-Ekundu wazalwa nge-2 ka-Novemba ngo-2007, ze weza e-Honolulu Zoo ngo-2010. Ekunye neqabane lakhe, u-Moxy, bakhulisa amathole eengonyama amathathu atshintshelwe kweminye imizi yokugcina izilwanyana njengenxalenye ye-Association of Zoo and Aquarium's (AZA) Species Isicwangciso sokusinda. Iingonyama zaseAfrika zihlala iminyaka eli-15-25 ekuthinjweni.